Beddelidda telefoonada gacanta waa qayb ka mid ah fashion ka mid ah dadka rayn ah maalmahan. In kasta oo ay u bedesheen ah Samsung phone cusub oo la casriyeeyay waa mid farxadeed oo arrinta sharafta lahaa, taasuna waxay ka timaadaa iyadoo ka kaaftoomi ah in aad la kulmi marka aad bilowdo guuray xogta aad ka phone hore mid ka mid cusub.
Si lagaaga caawiyo in aad sida macnaha guud, halkan waa 15 iibsiga Samsung barnaamijyadooda / barnaamijyada sare oo aad u baahan tahay inaad ogaato. Qaar ka mid ah barnaamijyadooda, kuwaas oo lagu siiyo halka kuwa kale waa lacag la'aan. Iyada oo ku xidhan nooca iyo inta jeer ee isticmaalka, waxaad ka qaadan kartaa mid ka mid ah ugu wanaagsan ka mid ah liiska.
4 Beddelaadda Samsung in heshiiska karaa Xogta laga Samsung telefoonnada gacanta ama Kiniiniga si Computer
Marka xogta aad ka mobile Samsung ama kiniin in computer a wareejiyo, waxaad u baahan tahay barnaamij casri ah in uu leeyahay interface dareen leh oo waa ku ool ah si laguu siiyo oo dhan in ay qaadanayso in la qaban shaqada. Hoos ku qeexan yihiin 4 Samsung in ay xogta PC-ada wareejinta:
Wondershare MobileGo waa qalab si sahlan loo isticmaalo marka ay timaado xogta aad ka qalab Samsung ah in aad PC wareejinta. Barnaamijka waxay u adeegtaa sida dukaan one-stop ee dhammaan hawlaha mobile la xiriira sida ay taageerto ilaa aad telefoon, ay ka saareen entries nuqul, soo degida ama dhoofinta mails Noolaado Mail on your computer, iwm
• Tilmaamaha Muhiimka ah:
Kala iibsiga Data
Import / xiriirada dhoofinta iyo SMS ka / inay PC
Mid ka mid ah raad-click
Android Mirror (si loo xakameeyo interface mobile-ka ee PC a)
Ku dar / files music dhoofinta iyo sawiro
Data Eraser (in gabi ahaanba meesha laga saaro xogta ka phone)
Saar xiriirada nuqul
Import iyo dhoofinta mails ka / Noolaado Mail on computer
Qaab Audio diinta
2. Samsung Kies (dareen leh Samsung Key Easy System)
Samsung Kies ama Samsung Key dareen Easy System waa codsi ah oo lacag la'aan ah oo ay Samsung horumariyo in lagu xiro kombiyuutarka. Ka dib markii la rakibey, Samsung Kies si fiican u ogaadaa wax Samsung qalab mobile xiran PC. Iyadoo Samsung Kies, waxa aad maamuli kartaa smartphone Samsung ama miiska ka PC fudayd.
Firmware iyo macluumaad OS
AirDroid waa app bilaash ah telefoonnada gacanta Android. App ayaa lagala soo bixi karaa Google Play Store midig aad casriga Android ama kiniin. AirDroid kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan aad telefoonka ka PC isticmaalaya network wireless jira via web interface, sida la isticmaalayo browser internet oo lagu rakibay on your computer, iyo codsi kale ma u baahan yahay in lagu xiro kombuutarka.
• Developer: Studio cammuudda
Farriimaha Call iyo fariin
Wareejinta File via web interface
Maamulka wireless Buuxi
4. Connected sida Device Media (Direct Mobile inay Connection PC via USB)
Marka smartphone Samsung lagu soo xiro PC ah via cable USB in geeyey weheliyaan waxaa la, phone soo bandhigayaa fariin leh 'Connected sida Device Media'. Tan iyo markii barnaamijka app ama PC ma mobile ku lug leh geeddi-socodka, waxa aad isticmaali kartaa Windows Explorer ah si ay u maareeyaan waxyaabaha kaadhka xusuusta iyo SD gudaha aad telefoonka ee.
Fiiro gaar ah : Waxaad u maamuli karaa oo kaliya dukumentiyada, audio, video ama faylasha kale sida isticmaalka habkan. Ma aad maamuli kartaa xiriirrada, fariimaha, ama Guda wac la habkan.
• Developer: Samsung (dhisay-in feature)
No app dhinac saddexaad loo baahan yahay
Free ah kharashka
Simple nuqul iyo hawlaha Jinka shaqada
Kaydinta Gudaha iyo kaarka SD waxaa laga arki karaa in Windows Explorer
3 Wareejinta Samsung Data in heshiiska karaa Xogta laga Samsung in Samsung Devices
Oo ay weheliso macluumaadka laga qalab mobile Samsung gudbaayo PC ah - waxaa laga yaabaa in aawadood oo gurmad, waxa sidoo kale muhiim in sidoo kale si aad telefoon cusub oo mobile wareejiyo macluumaadkaaga. Saddexdan barnaamijyadooda kala iibsiga waxaa lagu sameeyey si loo caawiyo in aad heshid hawsha sameeyo hab fudud suurto gal ah.
Wondershare MobileTrans Waa barnaamij wax ku ool ah oo kuu ogolaanaya in waqtiga dhabta wareejinta xogta u dhexeeya laba telefoonada gacanta iyagoo isticmaalaya PC ah sida dhexe nin-. Labada telefoonada ka qayb waa in isku mar la xiran PC ka via fiilooyinka ay USB kala, iyo barnaamijka ka dhigaysa hanaanka wareejinta mid aad u fudud.
• URL Download: http://www.wondershare.com/phone-transfer/
Files warbaahinta Transfer
Soo Celinta ka gurmad
Masixi phone jir (ka hor inta uusan iibin off)
Samsung Smart Switch waa aalad kale oo xogta kala iibsiga ee ay Samsung ee qalabka Samsung. Si ka duwan Samsung Kies in loo isticmaalo si ay u maareeyaan hal phone Samsung ah via PC, Samsung Smart Switch kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan xiriirrada, abuse call iyo faylasha kale ee Saxaafadda / ka casriga kale Samsung fudayd.
Guda wac Transfer
Audio Transfer iyo video
SHAREit waa app gacanta xor ah oo madax bannaan oo isticmaalaa Wi-Fi feature dhisay-in ka mid ah ka qayb casriga ah si ay u soo diraan ama ay helaan xogta. Iyadoo wareejinta, SHAREit abuurayaa wireless Ad hoc la xidhiidha ku meel gaar ah oo leh telefoonka ka qayb ah oo kuu ogolaanaya in xogta lagu wareejiyo xawaare sare. Ka dib markii ay suuqa kala iibsiga ku dhamaato, Ad hoc xidhiidhka ku meel gaar ah la joojiyo.
Fiiro gaar ah: Si aad u gudbiyaan xogta la isticmaalayo SHAREit, SHAREit waa in lagu dhejiyaa on labadaba casriga ah ka qayb.
Abuurayaa xiriir via Wi-Fi
Awood wareejinta xogta deg deg ah
Bedelka files kale
3 Wareejinta Samsung u Mac
Ma aha heshiis weyn haddii aad isticmaalayso qalab Samsung ah mobile iyo sidoo kale jeclaan iyo isticmaalka computer Mac ah. Si looga hortago kaaftoomi ee waafaqsan, kuwaas oo saddex-ada kaa caawiyaan in aad ka qalab Samsung aad u gudbiyaan xogta si aad u computer Mac la dadaalka ugu yaraan:
1. Wondershare MobileGo for Android Pro (for Mac)
Sida Wondershare MobileGo for Windows, Wondershare MobileGo sidoo kale yimaado ee kombiyuutarada Mac. Ma jiro wax farqi ah ee u shaqeeyo labada kala duwanaansho barnaamijka. Waxaa kaliya interface in la bedelo si ay u sii waafaqsaneyn dhufto ee ay u dhigma iyo si ay u caawiyaan dadka isticmaala heli UI ugu dareen leh.
URL Download: http://www.wondershare.com/mac-android-manager/
2. Wondershare MobileTrans u Mac
Isla Wondershare MobileTrans for Windows, barnaamijka Mac sidoo kale awoodo gudashada dhammaan howlaha isticmaalaya qaababka iyo hawlaha in ay isku mid yihiin in labada walaalaha ah. Faraqa kaliya ee waa in interface ah (in ay ku sii waafaqsaneyn dhufto ee kala) ee ku caawiya dadka isticmaala si fudud u helaan fursadaha iyo badhamada dhafan gudahood barnaamijka.
URL Download: http://www.wondershare.com/mac-phone-transfer/
3. Samsung Kies (for Mac)
Barnaamijkan wuxuu ka shaqeeyaa si la mid ah Samsung Kies for Windows falaa. Waxaa jira farqi weyn oo u lahayn sida laga reebo interface ka.
Intaa waxaa dheer in ay barnaamijyadooda ku xusan ee xogta ka qalab Samsung wareejinta qalab kale Samsung ama PC, hoose waa liiska 5 ka badan barnaamijyadooda kala iibsiga xogta loo isticmaali karo oo la telefoonnada gacanta Samsung:
1. WiFi File Transfer - Weli app kale oo lacag la'aan ah laga helayaa Google Play Store u ogolaanaya kala iibsiga xogta u dhexeeya qalabka wirelessly.
2. Samsung Wireless - app free Samsung ayaa si ay u gudbiyaan xogta wirelessly ka mid ah qalabka.
3. MOBILedit - jeclaa by users badan, MOBILedit waa aalad loogu tala galay labada wareejinta xogta iyo maamulka telefoonka.
4. PhoneCopy - qalab kale oo dhinac saddexaad mahadiyo dad badan oo loo adeegsado maaraynta telefoonka iyo wareejinta xogta.
5. DataPilot - app An hufan ee maamulka qorin, tafatir sawir, ringtones, iwm Waxa intaa dheer in, DataPilot sidoo kale awood u .Wadashaqayntaas u dhexeeya qalabka iyo kuu ogolaanaya in aad dib ilaa aad telefoon kula tallaabooyin yar oo sahlan.
Xogta beddelashada ka qalab duug ah waa muhiim. Haddii aadan si taxaddar leh lagu jiro hanaanka wareejinta ama ka dooran app ah hawlqabad la'aan, weligiis iyo wanaag aad waayi kartaa xogta qiimaha leh.
> Resource > Android > Top 15 Wareejinta Samsung Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato